Wakaaladda gaadiidka oo ogeyd cilladaha ka jirey goobta shilka tareenku ka dhacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Anders Wiklund/TT.
Wakaaladda gaadiidka oo ogeyd cilladaha ka jirey goobta shilka tareenku ka dhacay
La daabacay onsdag 8 januari 2014 kl 09.16
Goobtii shilka tareenku ka dhacay maalintii talaadada waxaa ka jirey cillado horay loo ogaa laakiin wax laga qaban. Ilaa sannadkii 2008 43 goor ayey tareeno ka baxeen khadkii ay ku socdeen. Ku xigeenka hoggaamiyaha ururka shaqaalaha ee SekoJohnny Nadérus ayaa sheegay in cilladahaas horay loo sii ogaa.
– Muddo dheer ayey dhibaatadani soo socotey. Waana wax marnaba la fahmi karin in aan xil la iska saarin sidii wax looga qaban lahaa.
Hawlwadeenadii kormeerka ku sameeyey goobtii shilku ka dhacay ayaa Johnny Nadérus u sheegay sida ay geyrarka khadka tareenadu daxaleysteen oo ay ahayd in wakaaladda gaadiidku goor hore aragto dhibaatadaas.
– Markaan halkaas nimid waxaan ku aragnay biraha waddada tareenada kala beddela oo gebi ahaanba kharaabsanaa iyo biraha isku haya oo meesha ka maqnaa. Waxaas oo dhammina waxay muujinayaan in ay halkaas ciilado ka soo jireen muddo dheer, ayuu hadalkiisa ku daray Johnny Nadérus.
Dhanka kale Tomas Borg oo madaxa waaxda dayactirka ee Wakaaladda gaadiidka Stockholm ayaa sheegay in aysan ahayn wax lala fajaco in cilladahaas la helo mar walba dayactir la sameynayo.
– Markii ugu dambeysey oo baaritaan lagu sameeyey ammaanka goobtaas shilku ka dhacay waxay ahayd 13 diseember, kolkaas oo laga helay saddex cilladood oo ay ka mid ahaayeen boolal debecsan. Waxaana loo qabtay in ugu dambeyn bartamaha bisha Maarso wax laga qabto, ayuu Tomas Borg u sheegay wakaaladda wararka ee TT isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu in raaciyey.
– Haddii cilladahaas la helay loo arki kuwo khatar ah, isla markiiba ayaa wax laga qaban lahaa ama waddada dhan ayaa la xiri lahaa. Marnaba ma dhayalsanno ammaanka.
Idaacadda telefishanka ee SVT ayaa horay u kashiftay in laga soo bilaabay 2008 ay 23 goor tareeno waddada ka baxeen cillado ay wakaaladda gaadiidku horey u ogeyd awgood, balse wax laga qaban.